Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Austria » Aostralia: tsy tadiavina ny mpitsoa-ponenana Afghana!
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Vaovao Mafana Austria • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny chancellor any Austria Sebastian Kurz
Ny olana dia ny hoe “tena sarotra ny fampidirana ireo Afghana” ary mitaky ezaka be tsy zakan'i Aostralia amin'izao fotoana izao, hoy i Kurz. Manana ambaratonga ambany amin'ny fanabeazana sy ny soatoavina samihafa tanteraka ny ankamaroan'izy ireo raha ampitahaina amin'ny ampahan'ny mponina ao amin'ny firenena, hoy izy nanamarika fa maherin'ny antsasaky ny tanora Afghans monina any Austria no nanohana herisetra ara-pinoana.
Tsy mila mpitsoa-ponenana Afghana intsony i Aotrisy.
Ny "fampidirana ny Afghans amin'ny fiaraha-monina tandrefana dia" tena sarotra ".
Efa manana ny vondrom-piarahamonina Afgana fahefatra manerantany i Austria.
Sivily maherin'ny 123,000 XNUMX no noroahin'i Etazonia sy ireo mpiara-dia andrefana avy tany Kabul taorian'ny nandravan'ny mpampihorohoro taliban an'i Afghanistan ny tapaky ny volana aogositra teo.
Ny ankamaroan'ireo mpitsoa-ponenana Afgana ireo dia homena fialokalofana any Etazonia, saingy nanaiky ihany koa ny Vondrona Eropeana fa haka Afghana 30,000 XNUMX izay nandositra.
Na dia naneho fahavitrihana handray ireo mpitsoa-ponenana aza i Alemana sy i Frantsa dia anisan'ireo firenena nandà tamim-pahatsorana ny hevitra momba ny fahatongavan'ireo Afghan hafa i Austria.
Nanambara ny masoivohon'i Atoa Sebastian Kurz fa efa manana mpifindra monina ampy i Austria Afghanistan, ary tsy handray anjara amin'ny famindran-toerana ny mpitsoa-ponenana Afgàna nafindra toerana avy tao Kabul ny firenena taorian'ny nisamborana an'i Taliban.
“Tsy handray ireo Afghana mandositra any amin'ny firenentsika izahay raha mbola eo amin'ny fitondrana aho,” hoy i Sebastian Kurz nanambara tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny gazety Italiana La Stampa.
Nanantitrantitra i Kurz fa “zava-misy” ny hevitry ny governemanta Austrian manoloana io olana io ary tsy midika akory izany fa tsy misy ny firaisankina amin'ireo renivohitra EU hafa ao amin'ny faritra Vienna.
"Taorian'ny Afghana maherin'ny 44,000 tonga teto amin'ny firenentsika tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia efa manana ny vondrom-piarahamonina Afgàna fahefatra lehibe indrindra eran'izao tontolo izao i Aostralia", hoy ny fampahatsiahivan'ny chancelier.
Ny olana dia ny hoe “sarotra be ny fampidirana ny Afghans” ary mitaky ezaka be tsy zakan'i Aostralia amin'izao fotoana izao, hoy ity mpanao politika mpandala ny nentin-drazana 35 taona ity. Manana ambaratonga ambany amin'ny fanabeazana sy ny soatoavina samihafa tanteraka ny ankamaroan'izy ireo raha ampitahaina amin'ny vahoaka sisa tavela ao amin'ny firenena, hoy izy nanipika, ary nanampy fa maherin'ny antsasaky ny tanora Afghans monina any Austria no nanohana herisetra ara-pinoana.
Mbola mazoto manampy ny Afghana kivy i Vienna, satria nanokana vola 20 tapitrisa euro hanampiana ireo firenena mpifanolo-bodirindrina amin'i Afghanistan amin'ny famindrana ireo mpitsoa-ponenana, hoy i Kurz.
Fa ny vondrona Eraopeanina politika nanomboka tamin'ny vanim-potoanan'ny krizy mpifindra monina tamin'ny 2015 - raha olona an'aliny maro no nandositra ny ady tany Afrika Avaratra sy ny Moyen Orient no nalefa tao amin'ny vondrona - "tsy mety ho vahaolana ho an'i Kabul na ny Vondron Eropeana intsony", hoy i Kurz .
Nanitrikitrika ity mpitarika Australiana ity fa "efa nazava tamin'ny governemanta eropeana rehetra izao ny tokony hisahana ny fifindra-monina tsy ara-dalàna ary ny fiarovana ny sisintany ivelany any Eropa" hamahana io olana io.
Sebastian Kurz mino fa ny Vondrona eropeana dia tsy maintsy miasa mba hamotehana ny "maodelin'ny orinasam-barotra" ataon'ireo mpivarotra olona izay manatitra olona any Eropa. Mikasika ireo mpifindra monina dia tokony havadika any amin'ny sisintanin'ny UE izy ireo ary halefa any amin'ny firenena niaviany na any amin'ny firenena antoko fahatelo.